Coral Reef: Lunch time!
အုပ်ကြီး said on January 5, 2011 at 10:38 PM
ညနေဘက် ထမင်းသိပ်မစားဘဲ ကြာဇံလိုမျိုးတွေစားရင် အေးဆေးကျပါတယ်ဗျာ
TZA said on January 5, 2011 at 11:30 PM
၁ နှစ်လုံးချခဲ့သမျှ delifrance မှာ ၁၀ ကီလိုပြန်တက်ရင် ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ၊ လောင်းကြေးကလည်း ဝိတ်ချတာကို အားပေးသလိုလို မပေးသလိုလိုကြီး၊ ဟွန်း..
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on January 6, 2011 at 2:56 AM
မလေးနဲ့ဇွန်နဲ့ အဲ့ဒါတစ်ခုတော့ မတူဘူးရယ်..
အဲသလိုနည်းနဲ့ ၀ိတ်ကျအောင်လုပ်တာလည်း တမျိုးဟုတ်နေတာပဲနော်..း))
မြူးမြူး said on January 6, 2011 at 7:34 AM
၇ကီလိုချမယ့်အဖွဲ့ထဲ မြူးမြူးလဲပါမယ်လေ.. ၃လအတွင်း ၃ကီလိုကျသွားလို့ အားတက်နေတာ.. လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖြစ်တာ နည်းနည်းကြာတာနဲ့ ပြန်တက်ချင်နေပြီ.. အတူတူ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရအောင်လေ.. ဘယ်မှာနေတာလဲ.. အိမ်နီးရင်ကောင်းမယ်.. :)
sonata-cantata said on January 6, 2011 at 8:11 AM
ရုံးမတတ်တဲ့ တို့များလည်း ၀ိတ်ကျချင်တယ်း)
noblemoe said on January 6, 2011 at 8:18 AM
တကယ်တော့ ဝယ်စားတဲ့ရသာကိုမနှစ်သက်ဖူး သူတို့ ဟင်းတွေအရသာကိုမနှစ်သက်ပေမဲ့ သူ့ တို့ ညွှန်းတာလေးတွေလိုက်စားရင်း ထမင်းဘူးမထည့်ချင်ဖူးလေ။ အဲဒီချိန်လေးကိုလည်းနှစ်သက်တာ မမနဲ့တူတယ်။
Rita said on January 6, 2011 at 8:24 AM
သူများတွေ ဝိတ်ချချင်တယ်ဆို... ငယ်တုန်းက guide တွေကျောင်းကိုသွားရင်း အရပ်နဲ့ ဝိတ်နဲ့ ယှဉ်တိုင်းတော့ malnourished / underweight လို့ ပြောလာတယ်။ ဘာလို့ underweight လို့ တွေးမှာလဲ၊ အရပ်က ပိုရှည်နေတာလို့ တွေးမှာပဲ ဆို ပြန်ပြောခဲ့တာ သတိရတယ်။ =D ကိုယ်လည်း 7kg လောက် ဝိတ်တက်အောင် လုပ်ရင် ကောင်းမလားမသိ။
အင်ကြင်းသန့် said on January 6, 2011 at 11:03 AM
မမရေ....ရုံးချုပ်ပေါ်မှာနေတုန်းကတော့ ဂျင်းလည်း အဲလိုအချိန်မျိုးလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးပါရဲ့....အခုတော့ ဆိုဒ်ထဲမှာဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း.... စကားပြောစရာဆိုတာကလည်း ယောက်ျားလေးတွေချည်းပဲဆိုတော့....း(
ဇွန်မိုးစက် said on January 6, 2011 at 10:09 PM
အမသူငယ်ချင်းကလည်း ညနေစာပဲကြာဇံစားဖို့ အကြံပေးတယ် အုပ်ကြီးရဲ့။ :D
ဟုတ်ပ ကိုတီ... တစ်နှစ်လုံးချခဲ့သမျှ အဲဒီတစ်ရက်တည်းနဲ့ ပြန်တက်သွားရင် ဒုက္ခ... :0
မလေးကတော့ ၀ိတ်ချစရာမလိုဘူး ဟုတ် :)
မြူးမြူးက အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် ဘယ်မှာနေသလဲကွယ်?
ဟုတ်တယ် မိုးရေ... အဲ့ဒီအချိန်လေးကြောင့်ပဲ တစ်ရက် ၈နာရီကို မညည်းမညူဘဲ လုပ်သွားနိုင်တာ။
ရီတာ့ကို အရပ်နဲ့ဝိတ်ထည့်ပြီး ကိုယ့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေစစ်လို့ရတဲ့ အီးမေးလ် ပို့လိုက်ဦးမှ။ ;)
ဂျင်းလည်း အဲဒါနဲ့ ထမင်းဗူး နေ့တိုင်းယူဖြစ်သွားတယ် ထင်တယ်။
Shinlay said on January 6, 2011 at 10:54 PM
အဲ့ဒီလိုမျိုး စုပြီးထမင်းစားချင်လိုက်တာ။ ပျော်စရာနော်။
ကျမအလုပ်က ၁၂ နာရီခွဲဆိုပြီးတော့ အိမ်မှာပဲစားရတယ်။ ဒီကလူတွေက နေ့ လည်ဖက် ပေါင်မုန့် စားကြတော့ ပျော်စရာကောင်းချင်မှကောင်း မှာပါလေ။
ချစ်ကြည်အေး said on January 7, 2011 at 5:51 PM
အမလည်း မလေးလိုပဲ ဇွန်ရဲ့ နေ့လည်စာကို တယောက်ထဲ ကွန်ပြူတာရှေ့ ဘလော့ဖတ်ရင်း စားချင်တာ၊ အရင်ရုံးမှာ စားခဲ့တယ်။ ခု ရုံးသစ်ကျတော့ ကိုယ့်စားပွဲမှာ ထမင်းစားခွင့် မရှိဘဲ ပန်ထရီထဲ သွားစားကြရတယ်။ မကြိုက်ဘူး အဲလို မစားချင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်...:)
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on January 8, 2011 at 6:17 AM
ချစ်ကြည်အေးကို နေ့လည်စားချိန်မှာ လမ်းတူတူလျှောက်ရအောင် (စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောပါဘူး) ပြောမလို့ သူက ဘလောဂ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ ထားလိုက်ပြီကွယ်. ..း))
ဇွန်ရေ.. မလေး ဘလောဂ်က ဖတ်လို့ရသေးလားဟင်.. ဘာမှ ဖွန့်မပြောင်းဘဲ ဘာပြောင်းသွားလည်း မသိဘူး
အပြုံးပန်း said on January 14, 2011 at 7:37 PM
စကားပြောတာဟာ ကောင်းတဲ့ အကျင့်တခုပဲ၊
၇ ကီလိုကျအောင်လုပ်နေတဲ့ နည်းလေးလည်း
blackcoffee said on January 16, 2011 at 7:44 AM
အစ်မ ကျွန်တော် ဘလက်ကော်ဖီပါ ခုမှ ဒီဘလောဒ့်ကို ပထမဆုံး ရောက်ဖူးတာ စာတွေဖတ်သွားတယ် အစ်မ...
အစ်မ ၇ကီလိုဆိုရင် မနည်းဘူးနော်။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် အစ်မ တို့ ရုံးက တစ်ရုံးလုံး ဝတာလား။ အားလုံး ၇ကီလိုစီ ဝိတ်လျှော့မယ် ပြောလို့ မေးကြည့်တာနော်။ စိတ်ဆိုးနဲ့ဟီ ဟိ။
မြူးမြူး said on January 27, 2011 at 12:22 PM
မဇွန်.. မြူးမြူးက Jurong East မှာနေတယ်.. ခု BMI 25 (Normal weight) ကိုပြန်ရောက်သွားပြီနော်.. နည်းလမ်းကောင်းတွေ မျှဝေချင်တယ်.. သိချင်ရင်ဆက်သွယ်ပါ..း)